Kuphi Abasebenzisi Be-Inthanethi Beqala Uhambo lwabo Lokuthenga? Uchwepheshe we-Semalt unikeza uphenyo oluyigugu
Imibhalo yonke into efunwa ngumthengi ejwayelekile ingathengwa ku-intanethi. Lesi silinganisoI-shopper isonakele ngokukhetha kuzo zonke izinto ngezinkulungwane zabathengisi abaphikisanayo enikeza umkhiqizo ku-inthanethi ngesikhathi esifanayo.
Umphathi wePhasimende Impumelelo i-Semalt Amasevisi Wezindiza, uFrank Abagnale, uchaza ukuthi isitolo se-intanethi siqala ukukhipha lesi siphelo esingavamile.
Lapho Uqala khona
Ngo-2016, isifundo somthengi se-intanethi esenziwe ngokubuyekezwa kwamandla senza ukuthi kuningiabathengi be-intanethi baqala ukusesha kwabo into ekhethiwe kuma-Amazon naku-Google. Lezi zinsuku zithole amaphesenti angama-35 kubo bonke abathengi abaxoxwa naboukuthatha ingxenye engu-38%. Ngokufanayo, abadayisi abangu-21% bakhetha ukuqala ukusesha kwabo kumawebhusayithi e-e-commerce athengiswayo axhumene nemikhiqizo ethile - coquten della solgar whey.Ngakolunye uhlangothi, i-eBay ithwala u-6% waleli qembu njengendawo yabo yemakethe yokuzikhethela. Okutholakele kwakha injabulo ezimakethe, njengoba bekukhonaekhishwe yinkampani ehloniphekile ekhethekile ngokubuyekezwa okubalulekile, izilinganiso kanye nezinsizakalo zombuzo nezimpendulo. Umbiko wabo wawuthola ngokukhethekileisithakazelo kubadlali be-e-commerce njengabadayisi be-digital.
Ukuchithwa kokubuyekezwa kwamandla 'okutholakele kwaphinde kwaqinisekiswa kamuva ngonyaka ofanayo laphoi-comScore yenza isifundo esikhulu sokuziphatha kwabathengi. Lolu cwaningo alugcini nje kuphela oluhlangene nohambo lokusesha abadayisi be-intanethi kodwa futhiabathengi bangaphandle. Ekutholeni kwabo, abathengi abangu-27% baphendukela e-Amazon ngenxa yokuhamba kohambo lwabo lokuqala..Izinjini zokusesha ezisemthethweni zathola amaphesenti angu-15%njengokuqala kokuthenga abathengi. Ngokuthakazelisayo, abangu-13% abaphendulile baphendukela ezitolo ezithile zokuthengisa ukuthenga izinto zabo ezikhethwe nazoenye i-14% iphendukela kumawebhusayithi athile athengisa. Izicelo zamaselula ezithengisayo nazo zibonakale ku-4%. Izinkulungwane zeminyaka zazihlala njaloukukhetha okuphezulu kunethenga ye-intanethi kunabathengi abadala. Umehluko kuphela ophawulekayo phakathi kwalezi zinhlolovo ezimbili amaphuzu aphansi kusuka kuseshoizinjini lapha.
Noma kunjalo, sifika esiphethweni sokusungula injini yemvelo futhiI-Amazon njengeziqalo eziyinhloko zokumaketha kwe-digital, ukudala isithakazelo nokuguqula imoto ekuthengiseni. Futhi yindawo yokusika umlomoukuncintisana ngendlela yokuthengisa nokuthengisa izimpi eziphakeme kakhulu. Namanje ngezinombolo, amabhizinisi akwazi ukuphakamisa kulezi zesikhulumi ezimbiliingafinyelela kalula futhi ithonya kuze kufike ku-73% yengxenye yawo yamakethe okubhekiswe kuyo yonke imikhiqizo. Isibonelo esihle singaba izicathulo zesilisa eziphezuluiwebhusayithi ku-Google. Lewebhusayithi ingenza kalula isithakazelo kuma-35% wabathengi ku-intanethi ku-Google futhi enye i-38% ku-Amazon. Lezi zibaloimelela izigidi zamaRandi ebhizinisini futhi ngenxa yalokho inzuzo.
imikhuba ye-SEO izosiza amabhizinisi e-intanethi ukuthuthukisa amazinga abo kuma-Amazon ama-twonokuseshwa kwemvelo. Umgomo oyinhloko lapha ukukhipha futhi uthephe abathengi be-intanethi ngesikhathi sokuqala kohambo lwabo lokuthenga inthanethi. Kuyaukufezekisa lokhu, udinga amakhasi omkhiqizo enemininingwane ephelele ngokuqukethwe kwekhwalithi ngezincazelo zemikhiqizo eyanele nenembile. Okuqukethwe kuinkosi ku-SEO ngakho awukwazi ukwehlisa izinga lemininingwane nezincazelo oyisebenzisayo.
Namanje kokuqukethwe, faka amagama angukhiye ngokufanele namagama asetshenziswe kumkhiqizoichaza imilayezo leyo amakhasimende akho ayisebenzisayo ukuchaza umkhiqizo wakho noma umkhiqizo wakho. Futhi, yenza amanani, okuhlangenwe nakho kwamakhasimende, nezibuyekezo ezibonakalayoukusiza ekuguqulweni kokuthengisa. Isu elifanayo lisebenza kumawebhusayithi e-commerce kodwa ngaphezu kwalokho umuntu angathuthukisa ekwakhiweni,ingqalasizinda, kanye nesipiliyoni somsebenzisi wewebhusayithi.